Jiri ultrasonic vibrating probe dị ọcha
site ha na 20-11-04
Iji ultrasonic vibrating probe na nhicha: N'ihi pụrụ iche imewe nke gburugburu tube ụdị, ultrasonic vibrating probe karịsịa kwesịrị ekwesị maka nhicha nile di iche iche nke pipelines. Principlekpụrụ bụ ịgbanwe ike eletriki n'ime ike ultrasonic ma nyefee ya n'ọtụtụ na mmiri ...
Ojiji nke ultrasonic ọnwụ technology na kọmputa na ngwaahịa
Abstract: A na-ejikarị nkà na ụzụ Ultrasonic eme ihe na ụlọ ọrụ. Akwụkwọ a ga-ewebata ụkpụrụ nke ọnwụ ultrasonic, ma jikọta ihe atụ nke ngwaahịa kọmputa akọwapụtara iji tụnyere nsonaazụ nke ịkpụcha igwe na ịcha laser, ma mụọ ngwa nke ultrasonic ịcha techn ...
Ojiji nke ANSYS oke oke na njiri mara ya na mpi Ultrasonic ịgbado ọkụ
Okwu mmalite Site na mmepe nke teknụzụ ultrasonic, ngwa ya na-abawanye ụba, enwere ike iji ya hichaa obere unyi, a pụkwara iji ya maka ịgbado ọkụ ma ọ bụ plastik. Karịsịa na ngwaahịa plastik taa, a na-ejikọkarị ịgbado ọkụ ultrasonic, n'ihi na egwu ...
You ghọtara ọgwụgwọ ọgwụgwọ Ultrasonic? Nnukwu Mmetụta Mechanical HFMI (HFMI), nke a makwaara dị ka ọgwụgwọ Ultimate Impact Treatment (UIT), bụ ọgwụgwọ dị elu nke na-eme ka a kwalite ike ọgwụgwụ nke ...
Esi chepụta Structural nke ultrasonic ịgbado ọkụ
Etu esi jiri SN FEM ANSYS oke nyocha na ihe puru iche nke mpi mpịachi ultrasonic